गोपीराम स्याङ्तान - कान्तिपुर समाचार
कोरोना कहर : चुनौती तोड्न के गर्ने ?
वैज्ञानिक युग भनिएको २१औं शताब्दीमा पनि हाम्रो पुस्ताले विश्वभर कोरोना महामारीका कारण अकल्पनीय परिस्थिति सामना गरिरहेको छ। डिसेम्बरमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्राजाति चीनको मध्यभागबाट सुरु भएर विश्वका २१० भन्दा बढी देशमा फैलिइसकेको छ। यसको सुरुवाती संक्रमण नै छिमेकी राष्ट्रबाट भएकाले नेपाल कसरी अछुतो रहन सक्थ्यो र? कोरोनाको इपिसेन्टेरबाटै आएका एक विद्यार्थीमा पहिलोपटक नेपालमा संक्रमण देखियो। त्यो घटना नेपालका लागि महामारीको पहिले चरण थियो।
विश्व समुदाय यतिबेला महामारीको रूपमा फैलिरहेको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम र उपचारको संकटसँग जुधिरहेको छ। यो भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म ६९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। १२ लाख ७५ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्।
गोपीराम स्याङ्तानका लेखहरु :